Ndinogona here kuvaka zvakanakisa backlinks pasina pangozi yekukuvadza nzvimbo dzangu?
Mawebhusayithi ezvitendwa nema blogs ane peji PageRank uye masimba ehurumende ndiyo nzvimbo dzakanaka dzekuvaka zvakakonzera kumashure. Kutaura zvazviri, injini yekutsvakurudza iri kuongorora idzi backlink kuti "kunzwisisa" kuti zita rako rewebhu rinokudzwa nderei, uye kuti inokosha zvakadini iyo inopa kuvashandi. Ndicho chikonzero kuva nehupenyu hwehutano hwehutano hwehuwebsite kana bhulogi zvakakosha zvikuru, kunze kwekuti iwe uchida kuti iratidzwe pane imwe nzvimbo iri kure nemigumisiro yekutsvaga yeGoogle's SERPs.
Chii Chinogadzira Organic Link Profile
Panguva imwe chete, maitiro akanaka ehupenyu anoratidza kuti uri kuvaka zvikwiriso zvepamusoro zvakasikwa zvakasikwa uye zvakasikwa. Semuenzaniso, chero zvese zvinonyangadza, zvisingabatsiri, zvisingabatsiri, zvinoshandiswa, zvekutengeserana kana zvekushandurudza zvishandiso nehutano ndizvo zvinonyanya kuvengwa neGoogle. Kutaura zvazviri, zviito zvakadaro zvinongokundikana kuita maererano neWebsite Webmaster Guidelines, iyo inowanzogamuchirwa nekuda kwekugadzirwa kwewebhu uye pfungwa yose yekutsvaga Engine Optimization pamwero. Saka, chii chinoita kuti "legal" link kuvaka urongwa husingazozivikanwi sekuputsa? Zvose zvaunoda ndezvekuti uvakwe nehupamusoro hwemashure ekudzokera shure usingashandisi avo avo vatotaurirwa zvinyengeri kana zvirongwa zvisingatenderwi nemajena makuru ekutsvaga. Ingoita kuti zvinhu zviitike zvakasikwa.
Ngatitikei kusvika kunzvimbo. Ndeipi nzira isinganzwisisiki yekuvakwa kwehutano hwakanaka? Ndinotenda kuti zvose zvaunoda kuti unzwe wakachengeteka ndezvokuti uzvichengetedze kure ne "rima". Usamboenda kune chero Gy-Hat SEO kana Black-Hat SEO maitiro, ayo anongorongedza kunyengedza kana kushandiswa nehurongwa hunoyevedza hunoshandiswa neGoogle kuti uone nzvimbo yose yewebsite yepamusoro yeSERPs. Nenzira iyo, hapazovi nenzvimbo yakasara yekururamisa kuisa webhusaiti yako kana blog kuburikidza nehutengo hweGoogle.
Kurudzira Kubatana Kwehutano Nehutano Hwakanaka
Itai kuti zvinyorwa zvenyu zvive shanduro inobatsira yekuvaka zvakakonzera kumashure zvakanakisisa nenzira yakakosha. Zvichida iyo ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa yakachengetedzwa yekugadzira kubatana kwekugadzira pasina chero njodzi yekukuvadza nzvimbo yako Remember - iwe unogona kuwana zvakawanda zvakawanda kubva pane zvaunogara uchiverenga-zvose zvaunoda ndeyekuti uone kuti yakasiyana, inobatsira uye inopa kukosha kwechokwadi kune chinangwa chevateereri. Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kuenderera nekuwana backlinks, kutungamirira, kubhadhara, zvikamu, uye kutaura. Panguva imwe chete, iwe pachako uchazviita iwe semunhu uye ane kodzero yemabhizimisi mutungamiri, pakati pekuwana hukuru hukuru newebsite yako kana blog - kubva pamaonero evashamisi vako vanoshamisika, pamwe chete nemichina yekutsvaga pachavo.
Pakupedzisira, pano pane dzimwe nhovo dzekuti iwe utange kufamba nenzira yakarurama. Nenzira iyo, unogona kuvaka yakakwirira yever backlinks yeSeO zvinangwa uye unonzwa wakachengeteka kubva pakutanga:
Iva nechokwadi chekuti zvinyorwa zvako hazvipi zvinopa kukosha kwevanhu vakarurama, asi kurikupa pane imwe purogiramu yerwendo rwemushandisi. Yenguva yekuyeuka zvinyorwa zvekugadzirwa kwakanaka kwema digital digital, chaiko?).
Iva akachenjera kugadzira nzvimbo yakasimba yeIndaneti yewebsite yako. Edza kupinda munharaunda dzinofarira uye ugadzire mapeji makuru emabhizimisi makuru ekuparadzira zvinyorwa zvako zvakanakisisa pa Social Media.
Funga kubatanidza chikamu chemashoko enyu akazara. Yeuka, zvose zvaunoda kuti utange zvisikwa zvakasikwa zvekugadzirisana - shandisa zvinyorwa zvako zvakakosha kugovana, kutaura, nekuwana hukama ne. Ita kuti zviitike nenzira inenge ichitenderera-yekudzosera zvimwe zvekuita uye zvakakosha shreds zvehuwandu mune chimwe chinhu chinonakidza uye chinotora maziso, zvakadai sep infographics yakasiyana, mahwendefa asingakwanisi, uye chero imwe nzira ipi zvayo yekushongedza dhiyabhorosi. Icho chinonyatsoshanda chekubatana kwekubatana, kunze kwekuchengetedza nzira yakachengeteka Source .